Naqshadeynta iyo Isku imaatinka - Mestech Industrial Limited
Naqshadeynta alaabta iyo isku imaatinka noqonayaa wareeg wax soo saar dhammaystiran oo alaab ah.
Mestech waxay leedahay koox khibrad iyo khibrad u leh injineero, kuwaas oo ku siin kara naqshadda balaastigga iyo qaybaha birta ee macaamiisha korantada, qalabka korontada, aaladaha caafimaadka iyo alaabada kale iyadoo loo eegayo shuruudahaaga, iyo sidoo kale sameynta moodeelka, xaqiijinta iyo hagaajinta qaabeynta.
Waxaan ku siinaa naqshadeynta sheyga waxyaabaha soo socda:
1. Naqshadeynta warshadaha ee badeecad cusub.
2. Falanqaynta guud iyo suurta galnimada wax soo saarka elektarooniga ah iyo qalabka yar yar ee guryaha.
3. Naqshadeynta faahfaahsan ee qaybaha balaastigga ah iyo qalabka qalabka.
4. Macaamilku waa inuu bixiyaa xogta asalka ah iyo shuruudaha gaarka ah ee muuqaalka iyo cabbirka naqshadda, wuxuuna siinayaa 3D ama 2D sawirro ka kooban qaybaha PCBA, kala-goysyada iyo qaybaha kale ee la xiriira muuqaalka iyo cabbirka alaabta.
5. Samee tusaalooyin tixraac sawirada naqshadeynta, oo xaqiiji naqshadeynta oo kaamil naqshadda. Oo tus macaamiisha si loo xaqiijiyo.
Shaqaaluhu waxay urursanayaan alaab
Naqshadeynta alaabta elektarooniga ah
Naqshadeynta wax soo saarka silikoonka
Dhinta naqshadeynta qaybta
Mestech waxay aasaastay nidaam wax soo saar dhameystiran iyo silsilad wax soo saar. Ka sokow naqshadeynta wax soo saarka cusub, waxaan ku siin karnaa macaamiisha adeegyo hal-joogsi ah oo ay ka mid yihiin wax soo saarka caaryada, qaybaha wax soo saarka iyo soo iibsiga, shirarka wax soo saarka, tijaabinta, baakadaha iyo xamuulka
1. Wax-soo-saarka caaryada caaga ah iyo qaybo wax lagu duubo, daabacaadda shaashadda xariirta, korantada
2. Ka shaqaynta qaybaha birta
3. Iibsiga qalabka baakadaha iyo agabyada kale ee dheeriga ah
4. Isugeynta badeecada iyo tijaabinta.
5. Baakadaha alaabada iyo rarka.
Haddii aad haysato fikrad wax soo saar wanaagsan iyo koox macaamiil ah, waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino adeegyo taxane ah oo ka imanaya naqshadeynta wax soo saarka illaa dhammeystirka wax soo saarka wax soo saarka.